Amanqaku kaPeter Arvai Martech Zone |
Amanqaku ngu UPeter Arvai
UPeter yi CEO ye Prezi, isoftware yokunxibelelana, awayenza ngo-2008 kunye no-Adam Somlai-Fischer noPéter Halácsy, umzobi kunye nomqambi, njengeendlela zokwenza indlela ekhumbulekayo nenomdla yokuba abantu babelane ngamabali. Phambi kokusekwa kuka-Prezi, uPeter waseka i-omvard.se, inkampani edibanisa idatha kwiziphumo zonyango kwizigulana zasesibhedlele, kunye nokuphuhlisa umfundi wokuqala weendaba ukuze abantu balandele iiTED Talks kwizixhobo zabo eziphathwayo.
INzululwazi ejongene nokuThetha, iiNgcaciso zoKwazisa ngeNtengiso ezingalibalekiyo
NgoMvulo, Juni 20, 2016 UPeter Arvai
Abathengisi bazi ngcono kunaye nabani na ukubaluleka konxibelelwano olusebenzayo. Ngayo nayiphi na imizamo yentengiso, injongo kukuhambisa umyalezo kubaphulaphuli bakho ngendlela ebabambayo, inamathele ezingqondweni zabo, kwaye ubacenge ukuba bathathe inyathelo-kwaye kuyafana nangalo naluphi na uhlobo lwentetho. Nokuba uyakha idesika yeqela lakho lokuthengisa, ucela uhlahlo-lwabiwo mali kubaphathi abaphezulu, okanye uphuhlise igama eliphambili lokwakha uphawu kwinkomfa enkulu, kuya kufuneka